Irrawaddy interviewed with Zune Thin Zar - All Things Myanmar Burmese
Previous: « sexy Nann Wai Wai Tun
Next: Cartoon of the day »
Myanmar Blog » Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples » Irrawaddy interviewed with Zune Thin Zar
Irrawaddy interviewed with Zune Thin Zar
Often times, you find yourself frustrated with certain people. What do
Beware of this scam!!
My Love by Rob Thompson
Sometimes, you are so much in love, but you don’t know how
“ရင်ကွဲနာ” By Saya Soe min
“ရင်ကွဲနာ” August 19, 2015 at 6:53am “ကိုယ်သေရင် မြေမမြှုတ်ပါနဲ့ ထုံးသုတ်ခဲ့ပါ။ ဖုံးအုပ်မယ့် ဘွဲ့ဖြူမှာ
သရုပ်ဆောင်အနုပညာလောကထဲမှာ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင် sexy pose တွေကို ရိုက်ခဲ့တာပါလို့ ဧရာဝတီကို ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာတယောက် အနုပညာ လောကထဲကို ၀င်လာတဲ့ ၁ နှစ်ခွဲကျော်ကာလအလွန်မှာ သူ ရပ်တည်ချင်တဲ့နေရာတခုကို ကျေနပ်မှုအပြည့်နဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်ပြီလားဆိုတဲ့အပေါ် ဧရာဝတီဘလော့ဂ်ကို သူပြောပြဖြစ်တာက..
“ကိုယ့်အနေနဲ့ကျတော့ လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုအထိတော့ မရောက်ဘူးပေ့ါနော်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေနဲ့ ဖြစ်သင့်သလောက်တော့ ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တော့ အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိတဲ့အတွက်လည်း ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ အခုလိုမျိုး နာမည်တလုံးနဲ့ ရပ်တည်နိုင်တဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမလိုချင်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ ကျမအနေနဲ့ ခက်ခဲနေတုန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျမက ဒီဘက်မှာ ဓာတ်ပုံ မော်ဒယ်လ်ပိုင်းမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးသွားတဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ လွယ်လင့်တကူတော့ အရမ်းကြီး အောင်မြင်မသွားဘူး။ အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ခုက ပတ်သက်သလိုနဲ့ နည်းနည်းတော့ ကွာဟတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းက လူတွေက အရမ်းဟော့တာကြီးကို သုံးရမှာ နည်းနည်းလန့်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ် ဒီဘက်မှာ အောင်မြင်တယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ နေရာတခုကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့ တအားကြီးတော့ မလွယ်ကူ သေးဘူးပေ့ါနော်။ ထပ်ကြိုးစားရဦးမယ်။ တဖက်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ အောင်မြင်ချင် လည်း အောင်မြင်မယ်။ မအောင်မြင်လည်း ဓာတ်ပုံလိုင်းမှာပဲ ရှိရင်လည်းရှိမယ်။ ဒါကတော့ ကျမရဲ့ ကံပဲပေ့ါ။ အခုချိန်ထိတော့ ကျမ ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတခုအထိတော့ မရောက်သေးဘူး။ လက်ရှိအနေအထားလေးတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇွန်သဉ္ဖာဆိုတဲ့ အနေအထားတခုက ဒီလိုအနေအထားမျိုးကို ဒီနေရာကို ရောက်လာတယ်ဆို ကတည်းက တော်တော်တော့ ကျေနပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမဖြစ်ချင်တဲ့ နေရာတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေ့ါ။” လို့ မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာက ဆိုပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာဟာ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာကတည်းက Nude ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ Sexy pose တွေကြောင့် လူသိများလာခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်အားပေးမှု ရရှိလာခဲ့သလို ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများစွာနဲ့လည်း တွေ့ကြုံခဲ့ရသူပါ။ သူဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတလျှောက်မှာ အားပေးမှုနဲ့ ဝေဖန်မှု နှစ်ခုမှာ ဘယ်လိုဒဏ်မျိုးကို အများဆုံး ခံခဲ့ရလဲ ဆိုတာဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာတခုပါ။ Sexy Model ဆိုတဲ့ အနေအထားတခုက မြန်မာပြည် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ကျင်းသားရအောင် လေ့ကျင့်ယူနေတဲ့ အချိန်ကာလတခုလို့ဆိုရမလိုပင်။
Credit to Irrawaddy
Myanmar people’s definition of “sexy”
Interviewed with JohnLwin about Khin Wint War’s penalty
Moe Hay Ko’s Bold and Colorful Fashion